မပေါ့ဆသင့်တဲ့ ခွေး၊ကြောင် ကုတ်ခြစ်ဒဏ်ရာ | OnDoctor
အထွေထွေရောဂါများအကြောင်းကျန်းမာသော နေထိုင်မှုပုံစံအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများ
By OnDoctor Editor	 On Sep 18, 2020 Last updated Sep 18, 2020
ခွေးလေးတွေ၊ ကြောင်လေးတွေဆိုတာ လူတွေရဲ့ အချစ်ခံသတ္တဝါလေးတွေပါ။ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လးတွေနဲ့ ဆော့ကစားရင်းဖြစ်စေ၊ သူတို့လေးတွေကို သွားရောက်စနောက်ရင်းနဲ့ပဲဖြစ်စေ ကုတ်မိခြစ်မိတတ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ လမ်းဘေးခွေးတွေ၊ ကြောင်တွေရဲ့ မထင်မှတ်ဘဲ ကုတ်ခြစ်ခံရတာတာ၊ ကိုက်ခံရတာတွေလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ထိုသို့ အကိုက်ခံရတဲ့အခါ လူတွေက စိုးရိမ်တကြီးနဲ့ ရှိတတ်ကြပေမယ့် ကုတ်မိခြစ်မိရာလေးတွေကိုတော့ အမှတ်မထင် လစ်လျူမိတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီသေးငယ်တဲ့ ကုတ်ခြစ်ဒဏ်ရာကို ဂရုမစိုက်မိရာကနေ ပိုးဝင်ခြင်းကစလို့ အခြားပြင်းထန်တဲ့အခြေအနေတွေအထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကြောင်လေးတွေနဲ့ ပက်သက်ရင် စိုးရိမ်ရတာကတော့ Cat-Scratch Disease (CSD) ဆိုတဲ့ ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ CSD ကိုဖြစ်စေတဲ့ Bartonella henselae ဘတ်တီးရီးယားပိုးက ကြောင်သန်းတွေထဲမှာ ပါရှိပါတယ်။ ကြောင်သန်းတွေကို ကြောင်လေးတွေက ကိုက်လိုက်၊ ကုတ်လိုက်တဲ့အခါ သူတို့ရဲ့ သွားတွေကြား၊ လက်သည်းတွေကြားထဲမှာ အဲ့ပိုးတွေက ပါသွားတတ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် ပိုးရှိနေတဲ့ကြောင်လေးတွေ ဘာလက္ခဏာမှ မပြတဲ့အတွက် လူတွေကလဲ သတိမထားမိတတ်ကြပါဘူး။
အဲ့ပိုးရှိနေတဲ့ကြောင်တွေက လူတွေကို အရေပြားပေါက်သွား၊ ပြဲသွားတဲ့အထိ ကိုက်မိ၊ ကုတ်မိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒါမှမဟုတ် အရေပြားပေါ်မှာ ရှိပြီးသား အနာ၊ ဒဏ်ရာနဲ့ အနာဖေးတို့ကို သူတို့ရဲ့လျှာနဲ့ လျှက်မိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် အဲ့ Bartonella ပိုးတွေ ဝင်သွားတတ်ပါတယ်။ နောက် ၃ ရက်ကနေ ၁၄ ရက်အကြာမှာ အဲ့နေရာကနေ ရောင်ရမ်းလာတာ၊ ဝိုင်းဝိုင်းအနီဖုလေးတွေ ထလာတာ၊ ပြည်တွေတည်လာတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်
🔹 ကုတ်ခံရတာနဲ့ နီးတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ Lymph အကျိတ်တွေ နာပြီး ကြီးလာ၊ ရောင်လာခြင်းတို့ ဖြစ်စေပါတယ်။ အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေတွေက ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထမရှိတတ်ပေမယ့် ဖြစ်လာခဲ့ရင် လူတွေရဲ့ ဦးနှောက်၊ နှလုံး၊ မျက်လုံးနဲ့ အခြားကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုလဲ ထိခိုက်စေပါတယ်။ ထိုအဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေတွေက အသက် ၄ နှစ်ကနေ ၁၄ နှစ်အရွယ်များနဲ့ ကိုယ်ခံအားကျဆင်းနေတဲ့သူတွေမှာ ပိုဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ်။
ကြောင်လေးတွေလိုပဲ ခွေးလေးတွေဟာဆိုရင်လည်း ခြေ ၄ ချောင်းနဲ့ လျှောက်သွားလိုက်၊ မြေတွေတူးလိုက်နဲ့ သူတို့ရဲ့ ခြေသည်းတွေမှာ ရောဂါပိုးတွေ မှိုပိုးတွေ အများအပြား ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ခွေးလေးတွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး နာမည်ကြီးရောဂါကတော့ ခွေးရူးပြန်ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ ကုတ်ခြစ်မိရာကနေ ခွေးရူးပြန်ရောဂါဖြစ်နိုင်ချေက အလွန်နည်းပါးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခွေးရူးပြန်ရောဂါပိုးဟာ ပိုးအကူးခံထားရတဲ့ သတ္တဝါတွေရဲ့ တံတွေးမှာ ပါရှိတဲ့အတွက် မိမိအနာပေါ်ကို ထိုခွေးက လျှက်မိရင်ပဲဖြစ်စေ၊ တံတွေးတွေနဲ့ လျှက်ထားတဲ့ ခြေသည်းတွေနဲ့ ကုတ်မိရင်ပဲဖြစ်စေ ခွေးရူးပြန်ရောဂါပိုး ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ ခွေးရူးပြန်ရောဂါသည် အချိန်မှီ ခွေးရူးပြန်ကာကွယ်မထိုးလျှင် အသက်ဆုံးရှုံးသည်အထိ ပြင်းထန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိတို့ရဲ့ အိမ်မွေးခွေးလေးတွေကို ခွေးရူးပြန်ကာကွယ်ဆေး ထိုးပေးထားသင့်ပါတယ်။ ထို့အပြင် လမ်းဘေးခွေးတွင် ခွေးရူးပြန်လက္ခဏာရှိပါက သက်ဆိုင်ရာသို့ အကြောင်းကြားသင့်ပါတယ်။
ထို့အပြင် ကုတ်ခြစ်ရာတွေက အရေပြားကို ပွန်းပဲ့၊ ပေါက်ပြဲစေတဲ့အတွက် တိရိစ္ဆာန်တွေဆီကပိုးတွေဘဲမဟုတ် လူတွေရဲ့ အရေပြားပေါ်က သို့မဟုတ် အခြားနေရာအနှံ့က ရောဂါပိုးတွေကလဲ ကိုယ်ထဲကို အနာကနေတဆင့် ဝင်ရောက်နိုင်ပြီး အရေပြားရောဂါတွေ၊ တုပ်ကွေးရောဂါတွေကအစ မေးခိုင်ရောဂါ၊ ဦးနှောက်အမြေးပါးရောင်ခြင်းအစရှိတဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ရောဂါတွေအထိပါ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
အကုတ်မခံရအောင် ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ ?
🔸 ဆော့ကစား၊ စနောက်နေရင်း ခွေးလေး၊ ကြောင်လေးတွေရဲ့ အခြေအနေကို လေ့လာပါ။ ဒေါသကြီးစွာ တုံ့ပြန်လာတာတို့၊ အထိမခံတာတို့ဖြစ်နေလျှင် သွားရောက်ထိတွေ့ခြင်း မပြုပါနဲ့။
🔸 ညင်ညင်သာသာ ကိုင်တွယ်ဆော့ကစားပါ။ အလွန်အမင်း သွားဆော့ကစားရင် သူတို့ကပါ စိတ်အားထက်သန်စွာ ပြန်လည်ပြုမူတတ်ပါတယ်။
🔸 ဖြစ်နိုင်ရင် laser pointer ၊ ငှက်မွှေး အစရှိတဲ့ အရုပ်ကလေးတွေနဲ့ အဝေးကနေ ဆော့ကစားပေးပါ။
🔸 ခြေသည်းလက်သည်းလေးတွေကို ညှပ်ပေးပါ။ တုံးထားပေးပါ။
🔸 လမ်းဘေးခွေးလေး၊ ကြောင်လေးတွေကို သွားမစပါနဲ့။
🔸 မိဘများကလဲ မိမိတို့ရဲ့ သားသားမီးမီးတို့ကို ခွေးလေးကြောင်လေးတွေနဲ့ ဘယ်လိုဆော့ကစားသင့်လဲ ပြောပြထားပါ။
🔸 ငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးငယ်တွေဆို ခွေးလေးကြောင်လေးတွေနဲ့ အနီးကပ် မထားမိပါစေနဲ့!
ကုတ်ရာခြစ်ရာတွေကို ဘယ်လိုကုသကြမလဲ ?
✅ ဒဏ်ရာကို သေချာကြည့်ပါ။ အပေါ်ယံသာ ကုတ်ခြစ်မိလျှင် ရေဖွင့်ထားတဲ့ ရေဘုံပိုင်အောက်တွင် မိနစ်အနည်းငယ်ထားပြီး ဆပ်ပြာနဲ့ သေချာစွာ ဆေးကြောနိုင်ပါတယ်။
✅ သွေးထွက်ခဲ့လျှင် ပတ်တီး (သို့) သန့်ရှင်းသော အဝတ်စတစ်ခုနှင့် သွေးထွက်ရပ်သည်အထိ ဖိထားပါ။ သွေးတိတ်သွားလျှင် အနာကို ဆပ်ပြာ၊ရေတို့နှင့် သန့်ရှင်းပေးပါ။
✅ ထို့နောက် အနာကို ခြောက်သွေ့အောင်ထားပြီး အနာနှင့် အနာတဝိုက်ကို ပိုးသန့်စင်ဆေးရည် Antiseptic solution (သို့) ပိုးသတ်ဆေးခရင် Antibiotic cream လိမ်းပြီး သန့်ရှင်းခြောက်သွေ့တဲ့ ပတ်တီးစနှင့် ပတ်ထားပါ။
✅ အနာကောင်းကောင်းမကျက်ဘဲ နီရဲ၊ ရောင်ရမ်းလာခြင်း၊ အနာနဲ့တစ်ဝိုက် ကိုက်ခဲလာခြင်းနှင့် အနာရင်းလာခြင်း ရှိမရှိ စောင့်ကြည့်ပါ။ အထူးသဖြင့် ပိုးဝင်နိုင်ချေပိုရှိတဲ့ ခြေနှင့်လက်မှာ ရရှိတဲ့ ကုတ်ခြစ်ဒဏ်ရာများကို အထူးစောင့်ကြည့်ပါ။
✅ အကုတ်ခြစ်ခံရသူမှာ အလွန်ငယ်ရွယ်သော ကလေး၊ အသက်အရွယ်ကြီးသူများနဲ့ ခုခံအားကျဆင်းနေသူဖြစ်ခဲ့လျှင် အနာကို သတိထားစောင့်ကြည့်ပေးပါ။
ဘယ်အချိန်မှာ ဆရာဝန်နဲ့ သွားရောက်တိုင်ပင်သင့်လဲ ??
❗️ ဒဏ်ရာသည် အပေါ်ယံမျှသာဖြစ်သော်လည်း မျက်နှာ၊ လည်ပင်း၊ မျိုးပွားအင်္ဂါအနားတစ်ဝိုက်တွင် ကုတ်ခြစ်ခံထားရလျှင်
❗️ ၁၀ မိနစ်ခန့် ဆက်တိုက် ဖိထားသော်လည်း သွေးမတိတ်လျှင်
❗️ ဒဏ်ရာသည် အရွယ်အစား ကြီးခြင်း၊ အတွင်းသို့ နက်ဝင်သွားခြင်း၊ ပြင်းထန်ခြင်းတို့ဖြစ်ခဲ့လျှင်
❗️ လမ်းဘေးခွေးကြောင် (သို့) ထူးဆန်းစွာ ပြုမူနေသော ခွေးကြောင်များ တိုက်ခိုက်သည့် ဒဏ်ရာဖြစ်လျှင်
❗️ ဒဏ်ရာသည် အလွန်အမင်းနာကျင်၍ ပိုးဝင်သည့် လက္ခဏာများ ရှိလျှင်
❗️ မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေး မထိုးဖူးလျှင် (သို့) အပြည့်အဝ မရသေးလျှင် ဆရာဝန် (သို့) နီးစပ်ရာ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများထံ အမြန်ဆုံး သွားရောက်ပြသသင့်ပါတယ်။ လိုအပ်လျှင် ခွေးရူးပြန်ကာကွယ်ဆေး ထိုးရနိုင်ပါတယ်!
အခုဆိုရင် အိမ်မွေးခွေးကြောင်လေးတွေနဲ့ ဆော့ကစားရင်း ကုတ်ခြစ်မိသည်ဖြစ်စေ၊ လမ်းဘေးခွေးကြောင်တွေဆီက အကုတ်ခြစ်ခံရသည်ဖြစ်စေ မပေါ့ဆဖို့၊ ဒဏ်ရာကို ဂရုစိုက်ဖို့ နည်းလမ်းတွေကို သိရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အားလုံးဘဲ ဘေးရန်ကင်းကင်းနဲ့ ရှိပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ရပါတယ်။
Author : Dr. Aye Chan Moe
သားသားမီးမီးတို့ရဲ့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားနှင့် Covid 19
Covid-19 ကာလအတွင်း သားသားမီးမီးတို့ကို အာဟာရပြည့်ဝအောင်…